သက်ဝေ: လှတစ်မျက်နှာ သန့်စင်စရာ…
Posted by သက်ဝေ at 5:25 PM
မိုးငွေ့........ October 18, 2013 at 6:01 PM
tg.nwai October 18, 2013 at 6:26 PM
အရောင်လေးက ချစ်စရာလေး...သူများတွေကို ဝေမျှတဲ့ သက်ဝေတယောက် ဒီထက်မက ပိုမိုနုပျို လှပ ပါစေ... :)
If you have time, pls also write info about make-up brand you used.
Kay Thwel October 18, 2013 at 9:28 PM
မျက်နှာ ကလိ တာဆိုစိတ်ဝင်စားတယ်.. ၃ လပဲ ရှိသေး..ညွန်းတယ်..၅ လလောက်မှ မသက်ဝေဆီ လှမ်းမေးပြီး သုံးကြည့်တော့မယ်း)
တန်ခူး October 19, 2013 at 7:46 AM
သက်ဝေ မျက်နှာလေးက နဂိုကို ချောမွေ့ နေတာ. ဈေးသိပ်မကြီးဘူးဆိုပေမယ့် ဘယ်လောက်လဲဟင်. ကိုယ့်အတွက်ဆို ဈေးကကြီးရင်ကြီးနေမှာ.
I saw in their website $150.00.
San Htun October 19, 2013 at 10:43 AM
အဲဒါက ကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်... ဈေးလဲကြီးလို့ညီမကတော့ ဈေးသက်သာတဲ့ Olay Pro-X Advanced Cleansing System ကို သုံးတယ်..:)
သက်ဝေ October 19, 2013 at 11:04 AM
Sephora မှာ တစ်ခုကို စလုံး ၂၁၅ ပါ... ယူအက်စ်ကနေ မှာလိုက်တာ (သူငယ်ချင်း ၃ ယောက် အတွက် ၃ စုံ) Tax ရော Postage ရော ဒီမှာ Tax နဲ့ GST ပေးရတာနဲ့ရော Paya Lebar Post Office မှာ သွားရွေးရတာနဲ့ရော... တခုကို ၂၈၀ လောက် ကျသွားတယ်... ဒီတော့ စလုံးမှာဆို ဟိုကို လှမ်းမှာမနေပဲ ဒီမှာ ၀ယ်တာက ကိုယ့်ဆီ ပစ္စည်းလည်း ချက်ချင်းရောက် ချက်ချင်း သုံးရတာပေါ့။ သူ့ Website မှာ ရေးထားတဲ့ $150 ဆိုတာက US$ ပါ...။
အလွမ်းမြို့ October 19, 2013 at 4:49 PM
ခုလို မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ
မယ့်ကိုး October 21, 2013 at 9:36 AM
ကျေးဇူးပါနော် မမ။ မယ်လည်း မျက်နှာသစ်ဆေးကောင်းကောင်း လိုက်ရှာနေတာ။ :)
ဒါပေမယ့် ခု စသုံးမှ မေးစရာတွေ့ လို့ အမသက် ကိုဘဲမေးမယ်နော်…
Brush ကို တခါသုံး ပြီးတိုင်းဖြုတ်ဆေးရမှာဟုတ် …အဲတော့ အဲဒီ ဖြုတ်တဲ့ တတ်တဲ့နေရာကကြာလာရင် ချောင်တာ ပျက်တာ ဖြစ်လွယ်မှာပေါ့နော်...
ပြီးတော့ သုံးတိုင်းမှာ Brush အနောက်ထဲကိုလည်းရေတွေ ဝင်ဝင်သွားတော့ စက်ကို dry အနေအထားဖြစ်အောင် နေ့စဉ်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းတယ် ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါလားဟင် …
သက်ဝေ October 24, 2013 at 4:09 PM
ညီမရေ... Brush ကို တစ်ခါသုံးပြီးတိုင်း တစ်ခါ ဖြုတ်ဆေးဖို့ မလိုပါဘူး... သုံးထားတာ သုံးလကြာမှ တစ်ခါ လဲရမှာပါ... အမကတော့ သုံးပြီးရင် ရေကို စင်အောင် ခါ... ပြီးရင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ဒါမှမဟုတ် တစ်ရှူးထူထူလေး ခေါက်ထားတဲ့အပေါ် တင်ထားလိုက်တာပါပဲ... သူ့ဟာသာ ရေခြောက်သွားပါတယ်...း-)